Tetsy amin’ny Carlton Anosy no nanatanterahana ny lanonana tamim-pomba ofisialy omaly alarobia 10 oktobra natrehin’ny praiminisitra Ntsay Christian. Andiany faha-14 no navoaka, misalotra ny anarana dokotera Jules Ravony, niofana nandritra ny 12 volana katroka. Zavatra maro loha no nampianarana azy ireo hahafahana miatrika ireo asa fampandrosoana eto amin’ny firenena. Nampiavaka ity andiany ity ny fisafidianana ilay ray mpiahy azy dia ny tale jeneralin’ny birao mahaleotena iadiana amin’ny kolikoly. Tsy izaho loatra no nosafidian’ity andiany ity, hoy Atoa Jean Louis Andriamifidy fa ilay rafitra tantanako. Mino sy mahatoky aho fa anisan’ny hanatevina ny ady amin’ny kolikoly hatao eto amin’ny firenena ny andiany dokotera Jules Ravony ho fampandrosoana ny firenena. Naseho ampahibemaso omaly ihany koa ireo andiany faha-15 handray anjara amin’ny fiofanana manaraka. Anisan’ireny ny talen’ny tranopirintim-pirenena etsy Analakely.